11/20/13 ~ Myanmar Forward
" ပဋ္ဌာန်း ၂၄-ပစ္စည်း (အင်္ဂလိပ် ဘာသာပြန်) "
Posted by drmyochit Wednesday, November 20, 2013, under ဗဟုသုတ | No comments
၁။ ဟေတု ပစ္စယ=The relation way of root.
၂။ အာရမ္မဏ ပစ္စယ=The relation of object.
၃။ အဓိပတိပစ္စယ=The relation of dominance.
၄။ အနန္တရ ပစ္စယ=The relation of contiguity.
၅။ သမနန္တရ ပစ္စယ=The relation of immediate contiguity.
၆။ သဟဇာတ ပစ္စယ=The relation of Co-existence.
၇။ အညမည ပစ္စယ=The relation of reciprocity.
၈။ နိဿယ ပစ္စယ=The relation of dependence.
၉။ ဥပနိဿယ ပစ္စယ=The relation of Sufficing condition.
၁၀။ ပုရေဇာတ ပစ္စယ=The relation of pre-existence.
၁၁။ ပစ္ဆာဇာတ ပစ္စယ=The relation 0f post-existence.
၁၂။ အာသေ၀န ပစ္စယ=The relation of habitual recurrence.
၁၃။ ကမ္မ ပစ္စယ=The relation of Kamma.
၁၄။ ၀ိပါက ပစ္စယ=The relation of effect.
၁၅။ အာဟာရ ပစ္စယ=The relation of food.
၁၆။ ဣန္ဒြိယ ပစ္စယ=The relation of control.
၁၇။ ဈာန ပစ္စယ=The relation of jhana.
၁၈။ မဂ္ဂပစ္စယ=The relation of path.
၁၉။ သမ္ပယုတ္တ ပစ္စယ=The relation of association.
၂၀။ ၀ိပ္ပယုတ္တ ပစ္စယ=The relation of dissociation.
၂၁။ အတ္ထိ ပစ္စယ=The relation of presence.
၂၂။ နတ္ထိ ပစ္စယ=The relation of absence.
၂၃။ ၀ိဂတ ပစ္စယ=The relation of abeyance.
၂၄။ အ၀ိဂတ ပစ္စယ=The relation of continuance ။
တရုတ် ရဲဌာနများတွင် မျက်နှာကိုတိပ်ပတ်ပြီး ထွက်ဆိုချက်ပေးခိုင်းသည့် နည်းသစ် ကျင့်သုံးနေ
Posted by drmyochit Wednesday, November 20, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ရဲစခန်းအများစုတွင် တရားခံများကို စစ်ဆေးသည့်အခါ မျက်နှာတစ်ခုလုံး တိပ်များဖြင့်ပတ်ကာ ဖြောင့်ချက်ပေးစေသည့် နည်းသစ်များ ကျင့်သုံးနေကြောင်း Sorthern Metropolis Daily သတင်းစာနှင့် People’s Daily သတင်း ၀က်ဘ်ဆိုက် တို့တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ယင်းစစ်ဆေးနည်းသစ်ကို တီထွင်ခဲ့သော တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း Huizhou မှ ရဲအရာရှိများက တိပ်ပတ်စစ်ဆေးနည်းသည် ဖြောင့်ချက်ရရန် ရုိုးရှင်းလွယ်ကူသည့်နည်းဟု ဆိုကြ၏။ လွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်က ကွမ်ကျိုးပြည်နယ် Huizhou မှ ရဲစခန်းတွင် ဖောက်ထွင်းဂိုဏ်းတစ်ခုအတွက် သံသယရှိသူ ၂၃ဦးကို စစ်မေးစဉ်က အဖမ်းခံရသူအားလုံးကို ဤနည်းဖြင့် စစ်မေးခဲ့ကြောင်း ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့သူတစ်ဦးက ဆိုသည်။
အစစ်ဆေးခံရသူများ၏ ပါးစပ်မှ အထက်ခေါင်းပိုင်တစ်ခုလုံး သတင်းစာစက္ကူနှင့်အုပ်ပြီး မျက်နှာတစ်ခုလုံး တိပ်ပတ် ထားသည့် ပုံများကို အွန်လိုင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။ တရုတ်မှ အွန်လိုင်းသုံးစွဲသူများက “၂” ဟု နံပါတ် ကပ်ထား သူတစ်ဦး၏ အဖြစ်ကိုကြည့်ပါ အသက်မှ ရှုလို့ရပါ့မလားဟု မေးခွန်းထုတ်လျက်ရှိသည်။
ရဲများကမူ သူတို့၏ လုပ်ရပ်သည် ဥပဒေဘောင်အတွင်း၌ ရှိကြောင်း ၊ ဆံပင်များ တိပ်ကပ်ခြင်းမှကင်းရန် သတင်းစာ စက္ကူဖြင့် အုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဆိုထားသည်။
Ref: People Daily
မိတ်ဆွေတို့ထဲမှာ သီတင်းသာ အခါခါကျွတ်သွားတယ်။ တစ်ကိုယ်တည်း အထီးကျန်ဘ၀က မကျွတ်သေးသူတွေ ရှိနေပါတယ်။
သူတို့ခမျာ သနားဖို့ အကောင်းသားဗျာ။ ကျွတ်ချင်လျက်နဲ့ အစွမ်းအစမရှိဘဲ ဖြစ်နေရတာ။ တစ်ချို့ကလည်း အမူလွန်သွားတာ။
တစ်ချို့ကျတော့ အရွေးလွန်တာ။ တစ်ချို့ကျတော့ ဇ မရှိတာ။ တစ်ချို့ကျတော့ မစရဲတာ။
ဘာ့ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် လူတိုင်းက သူ့ရဲ့ ဖူးစာဖက်ကို ရချင်ကြမှာပဲလေ။ ဖူးစာဖက်ဆိုတာကလည်း လက်ထပ်ယူဖြစ်သွားရင် ဖူးစာဖက် ဖြစ်သွားတာပဲလေ။
ခက်တာက လက်ထပ်ယူဖို့ ချစ်သူ။ ချစ်သူမရှိတာက ပြဿနာပဲ။
ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ နည်းလမ်းလေး ပေးပါရစေ။ အကြမ်းဖျင်းပဲ ပြောမှာနော်။
အသံကောင်းသူက ဂီတသံနဲ့ လူကို ဆွဲဆောင်တယ်။ သင်က အသံမကောင်းရင် အသုံးမ၀င်ချေ။
နောက်တစ်ခုက အဆင်း။ အဆင်းလှတာလည်း ဆွဲဆောင်နည်းပါ။ ဒါပေမယ့် အဲဒါက လူတိုင်းအတွက်မပာုတ်လို့ ထားတော့။
ဆန့်ကျင်ဘက် လိင်ကို ဆွဲဆောင်နည်းက အထိအတွေ့ အကောင်းဆုံးပဲ။
ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာတော့ ကိုယ့်ဖာသာ မီးစင် ကြည့်ကပေတော့။
ကောသလမင်း၏ အိမ်မက် (၁၆) ချက်
နွားနက်လေးခု ဝှေ့မှုဟန်ပြင်၊ မဝှေ့ကြဘဲ ရှောင်လွဲသည်မြင်။
အရှေ့ အနောက် တောင်မြောက်မိုးဆင်၊ ခြိမ်းသံပေး မိုးဝေးလွင့်ပျောက်စဉ်။
မြေကမကြွ ငယ်လှသစ်ပင်၊ ဖူးငုံရင့်ပြီး ပွင့်သီးတွေ့မြင်
အရွယ်မမျှ ပျိုမမယ်ခင်၊ သမီးသား လင်ထား အိမ်ထောင်ရှင်။
သမီးနှင့်သား စီးပွားပိုင်ရာ၊ မိနှင့်ဘ ကျွေးမှစားရမှာ။
နွားကြီးမကြိုက် ၀န်တိုက်နွားငယ်၊ မရုံးနိုင်ဘဲ ၀ပ်လဲနေတယ်။
ကြီးသူပယ်ရှား မြှောက်စားလူငယ်၊ တိုင်းပြည်ရေး ရှုပ်ထွေးပွေတော့မယ်။
ခံတွင်းနှစ်ခွ မြင်းလှရာဇာ၊ ကျွေးကျွေးသမျှ မ၀နိုင်ပါ။
မှူးမတ်မင်းစိုး လာဘ်ထိုးသူရှာ၊ နှစ်ဘက်စား တရားစီရင်မှာ။
၆။ ရွှေခွက် အိပ်မက်
ခွေးအိုထံဆက် ရွှေခွက်သိန်းတန်၊ ကျင်ငယ်အမြဲ ခွက်ထဲစွန့်ပြန်။
မျိုးမြတ်သမီး ပစ္စည်းမက်ဟန်၊ အမျိုးယုတ် လင်လုပ်ပေါင်းဆက်ဆံ။
ရှေ့ကကျစ်ချ လွန်စကြိုးကို၊ ခွေးမ ခိုးစား ကိုက်ဝါးခါမျို။
လင်ကြီးပစ္စည်း သိမ်းဆည်းမသို၊ လင်မြှောင်အား မယားလောကွတ်ပို။
၈။ ရေပြည့်အိုး အိပ်မက်
ဆင်းရဲသူများ ၀တ်စားမကျန်၊ အခွန်တွက် နှိပ်စက်ငွေတောင်းခံ။
ကြာမျိုးငါးဝ ပွင့်ကြရေကန်၊ ရေလယ်နောက်လျက် ကမ်းဘက်ကြည်ပြန်။
မြို့တွင်းပွေရှုပ် ခွန်တုတ်ကောက်ခံ၊ မြို့ ပြင်ထွက် ပြည့်နှက်စည်ကားရန်။
တစ်အိုးတည်းချက် အကျက်မညီ၊ ထမင်းမာဆတ် ပျော့နှပ်သုံးလီ။
မင်းနှင့်လူများ တရားမမှီ၊ မိုးသုံးစား ကွက်ကြားရွာချမည်။
မွှေးထုံနံ့ကြူး စန္ဒကူးသိန်းတန်၊ ပုန်းရည်နှင့်လဲ သုံးစွဲစားပြန်။
အလဇ္ဇီများ တရားဖိုးတန်၊ ငွေနှင့်လဲ အမြဲဟောမည်မှန်။
သံကြေးမပေါင်း ဗူးတောင်းဗူးအုံ၊ ရေတွင်စုပ်စုပ် နစ်မြုပ်လုံးစုံ။
ပညာရှိများ စကားဥဿုံ၊ ပြောသမျှ လောကမသုံးကုန်။
အိမ်လုံးတောင်လုံး ကျောင်းတုံးကျောက်ဖျာ၊ ရေမှာဘွားဘွား ထင်ရှားပေါ်လာ။
အဆိပ်ပြင်းတောက် မြွေဟောက်ကြီးကို၊ ဖားငယ်မများ ကိုက်ဝါးကာမျို။
အဆင်းမည်းနက် ကျီးငှက်ထံမှာ၊ ရွှေဟင်္သာများ ခ-စားနေပါ။
ပညာသီလ ပြည့်ဝသူဟာ၊ သူယုတ်အား ၀ပ်တွားနေရမှာ။
၁၆။ သစ်နှင့်ဆိတ် အိပ်မက်
မှတ်ချက်။ ။ အထက်စာကြောင်းကို ကောသလမင်း အိပ်မက်စကား ဖြစ်၍ အောက်စာကြောင်းသည် မြတ်စွာဘုရား ပြန်လည်ဖြေကြားသည့် အဖြေ ဖြစ်ပါသည်။
ကရင်ပြည်နယ် မှာ ပြဇာတ်ကရင်း ဘောလုံးကန်ခဲ့တဲ့ ရာဇာနေ၀င်း
Posted by drmyochit Wednesday, November 20, 2013, under အနုပညာ | No comments
ဇာတ်ကားတွေကို ဆက်တိုက် ပြန်လည် ရိုက်ကူးလာပြီ ဖြစ်တဲ့ ရာဇာနေဝင်းက ပြေတီဦး၊ မိုးယုစံ တို့နဲ့ ပွိုင်စင် ၁၅ဝဝ ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကား ကို ရိုက်ကူး နေပါတယ်။ ဒီ ဇာတ်ကား မှာတော့ အချစ်ကြီးတဲ့ လူပျိုကြီး အဖြစ် သရုပ်ဆောင် ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်ကား ရိုက်ရင်း သီချင်းခွေ အတွက် လည်း စီစဉ်နေတဲ့ ရာဇာနေဝင်း က “ဒီကားထဲမှာ ဇာတ်က ဟာသ ပုံစံမျိုး ဆိုတော့ ရယ်ရတာလေးတွေ လည်းပါတယ်။ ဇာတ်ကားတွေက ရိုက်ရတာ ဇာတ်ရုပ်တွေ ကတော့ အမျိုးမျိုး ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ရယ်စရာ ဟာသ ကားလေးတွေ ပိုများတယ်။ ဒါကလည်း ကုမ္ပဏီ နဲ့ ဒါရိုက်တာ စီစဉ်တဲ့ ဇာတ်တွေလည်း များပါတယ်။ ပြီးရင် သီချင်း ခွေက လုပ်နေတာ သုံးပုဒ်လောက် ကျန်သေး တယ်။ စီစဉ်ထားတာတော့ ပြီးတာနဲ့ ထုတ် မယ်။ ဒီနှစ်ကုန် ပိုင်းလောက်တော့ ဖြစ် မယ် ထင်ပါတယ်။” လို့ ပြောပြ ပါတယ်။
ရာဇာနေဝင်းက နိုဝင်ဘာ ၁ဝ ရက်နေ့ ကရင်ပြည်နယ် ကိုဖျော်ဖြေရေး နဲ့ ဘောလုံး ကန်ဖို့ အတွက် သွားရောက်မယ် လို့ ပြောပြတာကြောင့် “ပြဇာတ် ကမယ်။ ကိုကျော်ဇောလင်း တို့နဲ့ပါ။ ပြဇာတ်ကလည်း ညီအစ်ကို ၄ယောက်မှာ အစ်ကိုက အကြီးဆုံး ဟာသပြဇာတ်လေး ပါပဲ။ နောက်ရန်ပုံငွေပွဲ ဆိုတော့ ဘောလုံး လည်း ကန်မယ်။” လို့ ပြောပြခဲ့ပါ တယ်။
Posted by drmyochit Wednesday, November 20, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
တရုပ်နိုင်ငံက ဈေးအကြီးဆုံး ခလေးစွတ်ပြုတ်ပါ အမျိုးသားများအတွက် ကာမ စွမ်းအားတိုးစေလို့ဒေါ်လာထောင်ချီပြီး မှာစားကြပါတယ်။
ပြည်သူများအနေနှင့်တရုပ်လုပ်အစားသောက်တွေ(ပါကင်ထုတ်)များအားအထူးသတိထားရှောင်စေလိုပါတယ်။ အားလုံးဟာ ဓါတုဓါတ်ပေါင်းတွေ-ရောဂါဖြစ်နေသည့် ကျွဲ-နွား-မြင်း -ကြွက် အသားပေါင်းစုံကိုရေးပြီး အတုလုပ်ထားတဲ့အတွက် အလွန်ရင်လေးစရာပါ။နောက်ဆုံး သတ်သတ်လွတ်သမားများအတွက် ထုတ်တဲ့ အသားတုတွေမှာဆိုရင် လူရဲ့ မစင်မှနေ တဆင့်ဆင့် ထုတ်လုပ်ထားကြောင်းသုတေသီတဦးရဲ့ 
- တရုတ် ငုံးဥပြုတ် မုန့်လို့ခေါ်ပါတယ်။- တဘူးကို ၁၀၀ကျပ်ထဲနဲ့ရောင်းချချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။-
-ငုံးဥ ၇ ခြမ်းခန့်ပါဝင်ပြီး ဆီထဲတွင်နစ်နေသယောင် ဖန်တီးထုတ်လုပ် လိမ်ညာထားပါတယ်။
ကလေးများကို ၁၀၀ ကျပ်ဖြင့်ရောင်းချနိုင်တယ်ဆိုတော့လုံးဝမသကာင်္စရာပါ။
နိုင်ငံပြောင်းလဲတိုးတက်လာသော အခြေအနေများနှင့်အညီအမျိုးသားပြတိုက်(ရန်ကုန်)ကိုပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်နေ
နိုင်ငံပြောင်းလဲတိုးတက်လာသော အခြေအနေများနှင့်အညီ အမျိုးသားပြတိုက် (ရန်ကုန်)အား ပြင်ဆင်မှု များပြုလုပ်နေကြောင်း အမျိုးသားပြတိုက် (ရန် ကုန်)မှ ညွှန်ကြားေ ရးမှူး ဦးငွေထွန်းမြင့်က ပြောသည်။
”ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ကြီးက ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်မှာ အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ဖြစ်လာမယ်။ ပြီးတော့ တိုင်း ပြည်ကြီးက တဖြည်းဖြည်းနဲ့ တိုးတက် ပြောင်းလဲလာတယ်။ အလားတူပဲ ယဉ် ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်မှာရှိတဲ့ Museum တွေလည်း အဆင့်တစ်ခု ရှိ လာတယ်။ ပြောင်းလဲလာအောင် လုပ်တာပါ” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ ထို သို့ ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရာတွင် အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲ၍ ပြင်ဆင်နေပြီးပြတိုက်ခင်းကျင်းမှုများကို ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ပြတိုက်ရှိ သန့်စင်ခန်း၊ အလင်းရောင်စနစ် များကို ပြင် ဆင်ခြင်း အပိုင်း ဟူ၍ နှစ်ပိုင်းခွဲထားပြီးဖြစ်သည်ဟု အထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်က ပြောသည်။
ပြတိုက်ရှိ သန့်စင်ခန်းများကို ပြင်ဆင်ရာတွင် ယခုပြတိုက်သည် ၁၉၉၆ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်ပြသခဲ့သော ပြတိုက်ဖြစ်သည့်အတွက် ခေတ်နှင့်မလျော်ညီသော သန့်စင် ခန်းများဖြစ်လာပြီး ချို့ယွင်းပျက်စီးမှုများကို အကြီးစား ပြင်ဆင်မှုတစ်ရပ်အဖြစ် ပြုလုပ်နေသည်မှာ ပြီးလုနီးပါးဖြစ်နေပြီဟု သိရသည်။ ခင်းကျင်းမှုအပိုင်းတွင် လုံးဝ ပြောင်း လဲခြင်းမဟုတ်ဘဲ နဂိုမူလ အခင်းအကျင်းများကို အထားအသိုအချက် အလက်များမပျက် ပြုပြင်နေသည်ဟု ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးငွေထွန်းမြင့်က ပြောသည်။
ယခင်က ပြတိုက်အခင်းအကျင်းပုံစံများသည်လည်း ကောင်းနေဆဲဖြစ် သောအချက်များကို ပြင်ဆင်ခြင်းမပြုဘဲ အမြင်ရှင်းလင်းစေရန်နှင့် လေ့လာသူများ သက်သောင့် သက်သာ ရှိစေရန်အတွက်လက်ရှိတွင် ပန်းချီပြခန်းအထား အသို ပုံစံအချို့ကို ပြောင်းလဲပြီးဖြစ်ကာ လက်ရေးမူအခန်းရှိ အခင်းအကျင်းများကိုလည်း ဆက်လက် ပြင် ဆင် သွားမည်ဟု အထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်က ပြောသည်။
ထို့အပြင် ပြတိုက်ရှိအခန်းများတွင် အခန်းတွင်းရှိပစ္စည်းများ ကြာရှည်ခံစေရန်အတွက်တပ်ဆင်ထားသော UV Cover များကြောင့် လေ့လာသူများအတွက် အလင်းရောင် အပြည့်အဝရရှိစေ ရန် မီးတပ်ဆင်မှုအပိုင်းများကိုလည်း ပြု လုပ်ပေးနေသည်ဟု သိရသည်။ လက်ရှိတွင် အမျိုးသားပြတိုက် လေ့လာသူ ဦးရေမှာလည်း လအ လိုက်၊ နှစ် အလိုက် တိုးတက်မှုများ ရှိနေပြီး နိုင်ငံခြားသား လေ့လာသူနှင့် ပြည်တွင်း လေ့လာသူဦးရေမှာ ဆတူနီးပါးရှိနေ ကြောင်း ပြတိုက်ဧည့်အဝင်အထွက် စာ ရင်းများ အရ သိရ သည်။
အမျိုးသားပြတိုက် (ရန်ကုန်) တွင် လက်ရေးမူပြခန်း၊ သီဟာသနပြခန်း၊ ရတနာပုံခေတ်ပြခန်း၊ ကျေးလက်အနု ပညာပြခန်း၊ ပန်းချီပြခန်း၊ အဆင်တန် ဆာ ပြခန်း၊ ဗုဒ္ဓဆင်း တုတော် ပြခန်း၊ အာဆီယံကော်နာ စသည်ဖြင့် ပြခန်း ပေါင်း ၁၅ ခန်းရှိသည်။
စကော်ပီယံဂိုဏ်းနှင့် လုံးဝပတ်သက်ခဲ့ခြင်း မရှိဟု ငြင်းဆိုလိုက်သည့် ဦးနေဝင်းမြေးများ
တစ်ချိန်က ဘုန်းမီးနေလတောက် ခဲ့သော ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင်၊ တော်လှန် ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတ စသည့် တာဝန် များကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ ဦးနေဝင်း၏ သားသမီးမြေးများ ဖမ်းဆီး ခံခဲ့ရပြီးနောက် ဒေါ်စန္ဒာဝင်းသည် ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁ဝရက်နေ့တွင် နေအိမ် အကျယ်ချုပ်မှ ပြန်လည် လွတ်မြောက်ခဲ့ သည်။
ဦးအေးဇော်ဝင်းနှင့် ကိုဇွဲနေဝင်း တို့သည် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလက သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာ ခွင့်ဖြင့် ပြန်လည် လွတ်မြောက်ခဲ့ကာ နိုင်ငံတော်ပုန်ကန် မှုဖြင့် သေဒဏ်ကျခံ နေရသည့် ကိုကျော်နေဝင်းနှင့် ကိုအေး နေဝင်းတို့သည်လည်း အင်းစိန်အကျဉ်း ထောင်မှ ၂ဝ၁၃ နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့ တွင် လွတ်မြောက်လာခဲ့ ပြီဖြစ်ပါသည်။ နောက်ဆုံး လွတ်မြောက်လာခဲ့သော ဦးနေဝင်း၏မြေးများဖြစ်သည့် ကိုအေး နေဝင်းနှင့်ကိုကျော်နေဝင်းတို့အား အယ် ဒီတာအဖွဲ့မှ သွားရောက်တွေ့ဆုံမေး
မြန်းခဲ့သည်များအနက် အချို့အား ဖော် ပြအပ်ပါသည်။
► တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ အစည်းတွေက ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တပ်မတော်ဆိုတာမျိုးကို ဒီနေ့တောင်း ဆိုနေတဲ့အပေါ် ဘာများပြောချင်ပါ လဲ။ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။
တပ်မတော်ဆိုတာကို မပြောခင် ပြည်ထောင်စုဆိုတဲ့ဟာကို ကျွန်တော်ခံ ယူချက်အရ ပြောချင်တယ်။ ပြည် ထောင်စုဆိုတာ အခု အများပြောနေတဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရှိရ မယ်ဆိုတာ အင် မတန် အရေးကြီးတဲ့ စရိုက်လက္ခဏာ တစ်ခုပါ။ အဲဒီထက်ပိုပြီး အရေးကြီးတာ က ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံတော် သီချင်းဖြစ် တဲ့ တို့ဗမာ သီချင်းထဲမှာ ပါသလို ဗမာ ပြည်တစ်ဝှမ်းအကုန် ကိုယ့်အိမ်မှတ်ပါ။ ကိုယ့်ရာမှတ်ပါဆိုတာ ပြည်ထောင်စုပါ ပဲ။ ဆိုလိုတဲ့ သဘောက ရန်ကုန်မြို့မှာ နေတဲ့ ဗမာတစ်ယောက်ကလည်း ကိုယ့် မြို့လို့
ခံယူနိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုး ရှိရ မယ်။ ကရင်တစ်ယောက်၊ ချင်းတစ် ယောက်၊ ရှမ်းတစ်ယောက် စတဲ့ တိုင်း ရင်းသားတွေကလည်း ရန်ကုန်မြို့မှာနေ ရင် ကိုယ့်မြို့လို့ ခံယူနိုင် တဲ့ အခြေအနေ ရှိရပါမယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် လူမျိုးရေးအရ ခွဲခြားမှုမရှိဘဲ ညီရင်းအစ်ကို မောင်ရင်းနှမ သဖွယ်ချစ်ချစ်ခင်ခင် နေနိုင်ရပါမယ်။ အဒီလို ဖြစ်လာရင် တကယ် စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စုကြီး ဖြစ်လာမှာပါ။ ကိုယ့်ပြည်နယ်အကျိုးကို ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုရင် ကချင်ပြည် နယ် ဝန်ကြီးချုပ်က ရှမ်းလူမျိုးဖြစ်ချင်ဖြစ် နေမယ်။ မွန်ပြည်နယ်မှာလည်းဝန်ကြီး ချုပ်က စစ်ကိုင်းသား ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေ မယ်။ အဲဒီလို ပြည်နယ်စွဲ၊ လူမျိုးစွဲ မ ထားဘဲ သီလ၊ သမာဓိ ရှိရှိ ပြည်နယ် ကောင်းကျိုးကို သယ်ပိုးနိုင်မယ့် သူကို အားလုံး ထောက်ခံကြမယ်ဆိုတဲ့ စိတ် ဓာတ်မျိုး ပေါ်လာရင် ပြည်နယ်တစ်ခု ချင်းဆီကလည်းတိုးတက်ကြီးပွားလာ မယ်။ အဲဒီတော့ ဖက်ဒရယ်တပ်မတော် ဆိုတာ ကလည်း အားလုံး ညီညီညွတ် ညွတ် လုပ်ကြရင် မပေါ်ပေါက်နိုင်စရာ အကြောင်း မရှိပါဘူး။ ဖက်ဒရယ်ပြည် ထောင်စုဆိုတာ ဘယ်လို အဓိပ္ပာယ် ဖွဲ့ကြမှာလဲ။ ကျွန်တော် တို့နိုင်ငံမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂ဝ မှာ တပ်မတော်မှာ အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ အစဉ်အလာတွေ က စိတ်မကောင်းစွာ ပျောက်မသွားတာ တွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒါ တိုင်းရင်းသားတပ် ရင်းတွေက ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတာ ခံ လိုက်ရပါတယ်။ ဥပမာ ချင်းတပ်လိုဟာ မျိုးက တိုင်းရင်းသားတပ်တွေပါ။ ပြည် ထောင်စုအကျိုးအတွက် တိုက်ယူခဲ့ကြ တယ်။ အခု ကချင်ဆိုလည်း ကချင် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေ၊ ရှမ်းဆိုလည်း ရှမ်းလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေ စသဖြင့် ညီညီညွတ်ညွတ် ပြန်ဖွဲ့နိုင်ရင် တစ်ခု တည်းသော တပ်မတော်အဖြစ် တပ်မ တော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရဲ့ အောက် မှာ ပြည်ထောင်စုကို ကာကွယ်သွားမယ် ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ် မွေးနိုင်မယ် ဆိုရင် ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုတပ်မတော် ဆိုတာ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဗမာနိုင်ငံ သား တိုင်းရင်းသား တပ်ရင်းတွေ ရှိသ လို အညာဘက်မှာ ရှိတဲ့ တပ်မ (၃၃) လက်အောက်ခံ ခလရ (၄) ဆိုတာ ရှိပါ တယ်။ အဲဒါကိုအရင် က ဂေါ်ရခါး တပ် ရင်း (၄)လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒီ အဝင်မှာ ဂေါ်ရခါး ဓားကောက်(၂) ခုရှိပါတယ်။ အခုတော့ ရှိလားမရှိလား မသိတော့ ဘူး။အဲဒီတော့ ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားထဲ မှာမပါတဲ့ ဂေါ်ရခါးလူမျိုးတွေရဲ့ တပ် တောင် ပါနိုင်ခဲ့သေးရင်တကယ် ဖက်ဒ ရယ်ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်ကိုတိုင်းရင်း သားတွေဘာကြောင့် မလုပ်နိုင်ရမှာ လဲ။
► အခု လက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့ ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာများပြောလိုပါသလဲ။
၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ က စတင်ပေါ်ပေါက်လာကတည်းက အငြင်းပွားစရာတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒါ ကြောင့် အခြေခံ ဥပဒေထဲမှာ ကောင်း မွန်တဲ့ အချက်တွေ ရှိသလို ပိုမိုကောင်း မွန်အောင် ပြင်သင့်တဲ့ အချက်တွေ ရှိ နေတယ်ဆိုတာကို လက်ခံပါတယ်။ အ ခြေခံ ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆွဲရေးတို့၊ အသစ် ပြန်လည်ရေးဆွဲရေးတို့၊ ဒီအ တိုင်း ထားရေးတို့ဆိုတာက ကျွန်တော် တို့နိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ ပါတီတစ်ခုနဲ့ တစ်ခု သဘောထား ကွဲလွဲနေတဲ့ ကိစ္စဖြစ်ပါ တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ မိသားစုက ကိုယ်နေခဲ့တဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းက ကြီးတဲ့ အတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခု လှုပ်ရှား နေတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီကြီးတွေရဲ့ ခေါင်း ဆောင်ပိုင်းတွေနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်တဲ့ အနေအထား မှာ ရှိ ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပါတီတစ်ခုဘက်၊ နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဘက်ကို ဝင်ရပ်အားပေးပြီး ပုံချထားဖို့ မသင့် တော်ပါဘူး။ အားလုံးမိတ်ဆွေတွေလို မိတ်မ ပျက်နေသွားချင်ပါတယ်။ တစ်မျိုး သားလုံး ညီညီညွတ်ညွတ် ဆောင်ရွက် နိုင်မယ့် ကိစ္စတွေဆို ပြောပြနိုင်ပါတယ်။ လက်ရှိ ပါတီချင်း သဘောထားကွဲလွဲနေ တဲ့ ကိစ္စဖြစ်နေ တာကြောင့် မိသားစုမူအ ရ ဒီကိစ္စကို တစ်ဖက်ဖက်မှာ ရပ်တည်ဖို့ ကို ငြင်းဆန်ပါတယ်။
► အစ်ကိုတို့က နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား စာရင်းမှာ ထည့်သွင်းပေးဖို့ တောင်း ဆိုခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဒီလို တောင်းဆိုခဲ့တာလဲ။ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဆိုတာ ကို ဘယ်လို နား လည် ထားပါသလဲ။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားထဲမှာ ထည့် ဖို့ တောင်းဆိုတာထက်စာရင် အကျဉ်း ထောင်ထဲမှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ လူတွေကို လွှတ်ပေးဖို့ နိုင်ငံတော် သမ္မတရဲ့ ညွှန် ကြားချက်နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိုးတို့ ဦး ဆောင်တဲ့ ကော်မတီဖွဲ့ထားတဲ့အတွက် အင်မတန် လေးစားပါတယ်။ မိသားစု တွေထဲမှာ အကျဉ်းထောင်ထဲ ကျန်ရှိနေ သေးတဲ့ သူတွေရှိရင် သူတို့ဆီကို အ ကြောင်းကြားပြီး စာရင်းပေးကြပါလို့ ကမ်းလှမ်းထားတာ ရှိတဲ့အတွက် တုံ့ ပြန်ပြီးတောင်းဆိုလိုက်တာပဲ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင်လည်း ဘယ် တုန်းကမှ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဆို တာ တစ်ပိုင်းထားဦး၊ နိုင်ငံရေးသမား တစ်ယောက်အနေနဲ့ နိုင်ငံရေး လုပ်ရ မယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆ မျိုးနဲ့ရပ်တည်ခဲ့ တာမျိုးမရှိပါဘူး။ ကိုယ့် အမျိုးသားရေး အကျိုးစီးပွားထိခိုက်လာရင် ကာကွယ် ဖို့က လွဲရင် နိုင်ငံရေးသမားလို့ ခံယူ ထားတာ မရှိပါဘူး။ နိုင်ငံရေး အကျဉ်း သားဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေကို သတ်မှတ် ထားတာက ရာနှုန်းပြည့်မဟုတ်ရင် အတော်အတန်ကို သဘောကျနိုင်စရာ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်လို့ ယူဆပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်ရှိ နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေး တာက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပဲ ကွက်ပြီး မပေးဘဲနဲ့ လွတ်သင့်လွတ်ထိုက် တဲ့ သူတွေကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာ ခွင့်ပေး မယ်ဆိုရင် တိုင်းပြည်အသစ်တည် ထောင်နေတဲ့ နေရာမှာ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်တွေ အများကြီး ထွက်လာ နိုင်ပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် ရာဇဝတ်ပြစ်မှု အရ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး နစ်နာမှုရှိတဲ့ လူသတ်မှု၊ ရိုက် မှု၊ မုဒိမ်းမှုလိုမျိုး နစ်နာတဲ့ မိသားစုက တိုင်တန်းစွဲဆိုထားတဲ့ အမှုတွေကလွဲရင် ကျန်တဲ့ အမှုတွေကို လွှတ်ပေးသင့်တယ် လို့ မြင်ပါတယ်။ အဲဒီလို လွှတ်ပေးခြင်း အားဖြင့်လည်း တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုး အတွက် အများကြီးအကျိုးရှိပါလိမ့် မယ်။ ကျန်ခဲ့တဲ့ ရာဇဝတ်ပြစ် မှုကြောင့် ကျခဲ့တဲ့ သူတွေကိုလည်း မကျေနပ်လို့ တရားစွဲတဲ့ မိသားစုအပေါ်ကို ကြည့်ပြီး အမှုအကြီး၊ အသေးပေါ်မူတည်ပြီး လုပ်သင့်ပါတယ်။ ထောင်ထဲမှာကျနေတဲ့ သူတွေကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာ တရား ဥပဒေမဏ္ဍိုင် တိမ်းစောင်းပြီး မရောက် သင့်ဘဲရောက်လာတဲ့သူတွေ ရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုရင် အကျင့်ပျက် ခြစားတယ်။ လာဘ်ပေး လာဘ်ယူလုပ် တယ်ဆိုပြီး အရေးယူထားတဲ့သူတွေ ရှိပါတယ်။ သို့သော် ပြီးခဲ့တဲ့ အစိုးရ လက်ထက်မှာ အကျင့်ပျက်ခြစားတဲ့ သူတွေ အကုန်လုံး အရေးယူခဲ့သ လား ဆိုတဲ့အဖြေကို လူတိုင်းသိပါတယ်။တကယ်လာဘ်စားလို့ အရေးယူတာ လား၊ အစိုးရရဲ့ပေါ်လစီတစ်ခုနဲ့ ငြိလို့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးကို ဖယ်ရှား ချင်လို့ လာဘ်စား တဲ့ ပုဒ်မတပ်လိုက် တာလားဆိုတာ လုပ်တဲ့သူတွေနဲ့အလုပ် ခံရတဲ့သူတွေသိပါတယ်။ အဲဒီလိုမျိုး တရားဥပဒေ မဏ္ဍိုင်တိမ်းစောင်းလို့ မရောက်သင့်ဘဲ ရောက်နေတဲ့သူတွေ ရှိ ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဒီလို လွှတ်ပေး ခြင်းက နတ်၊ လူသာဓုခေါ်နိုင်မယ့် ကိစ္စ လို့ ထင်ပါတယ်။
ဒီနိုင်ငံရေး အုပ်ချုပ်မှုနဲ့ အစိုးရအနေ အထားတွေအရ စီးပွားရေးဘက်မှာ လည်း နီးစပ်ရာလူတွေသာ အများစု လုပ်ကိုင်ခွင့် ရခဲ့ ရနေဆဲပါ။ အဲဒီလိုပဲ အုပ်ချုပ် မှုဘက်က ပတ်သက်ဆက်စပ် တဲ့ မိသားစုတွေ၊ သားသမီးတွေ၊ တစ်ခါ လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ မိသားစု သားသမီးစတာတွေရဲ့ ထင်ရာစိုင်း၊ အနိုင်ကျင့် ဗိုလ် ကျမှုတွေဆိုတာ ဟိုတုန်းက တည်း က ရှိခဲ့သလို၊ အခုထိလည်း မြင်တွေ့ ကြားသိနေရဆဲပါ။အစ်ကိုတို့တုန်းက လည်း စကော်ပီယံဂိုဏ်းအနေနဲ့ ထွက် ပေါ် လာတဲ့သတင်းတွေအပေါ် အမြင် ကို သိချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့နဲ့ ပတ်သက်လို့ဂိုဏ်း တွေဖွဲ့တယ်။ ဆိုးသွမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့ ဟာတွေက အဲဒီချိန်တုန်းကအခြေအမြစ် မရှိဘဲနဲ့ ပြောဆိုခဲ့တဲ့စကားတွေ၊ အဲဒီလို စွပ်စွဲပြော ဆိုခဲ့တာတွေက ဥပမာအား ဖြင့် ၂ဝဝ၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတုန်းက ရန်ကုန်မြို့အဝင်မှာ ယာဉ်တိုက်မှု ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး မြို့အဝင်မှာရှိတဲ့ စစ် တပ်တစ်ခုက ရှင်းပေးလိုက်ရ တယ်ဆိုပြီး အိမ်ကို လှမ်းအကြောင်းကြားပါတယ်။ ဘာလို့ ရှင်းပေးရလဲဆိုရင် ကားတိုက်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ ညီအစ်ကိုတွေ ပါဝင်ကျူး လွန်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက် တပ်ကဖုံးဖုံး ဖိဖိနဲ့ လုပ်ပေးတယ်လို့ အကြောင်းကြား ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ မိဘများကအရမ်းအံ့သြခဲ့ပါတယ်။သူတို့ ပြောတဲ့အချိန် ကျွန်တော်တို့ အားလုံး မန္တလေးကို ရောက်နေပါတယ်။ရေစကြို ဆရာတော်ဘုရားကြီးကို တိပိဋကဘွဲ့ တံဆိပ် ချီးမြှင့်ခြင်းပွဲကို တက်ရောက်နေ ကြတဲ့ အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တော့ ကျွန်တော်တို့မေးလို့ သိရတာကတကယ် ယာဉ်တိုက်မှု ဖြစ်ပွားတဲ့သူက သူ့ကိုယ် သူ လူကြီးသားသမီးဆိုပြီး ပြောသွား တယ်။ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင် လူကြီး သား၊ သမီးလို့ ပြောရင်ရတယ်။ ဒီလမ်းထဲ မှာ နေတဲ့ စစ်မဖြစ်ခင်က နန်းရင်းဝန် တစ်ယောက်ရဲ့ မြေးဖြစ်နေတယ်။ သူများ ကြားရင် ယုံထင်ကြောင်ထင်ဖြစ်သွား တာပါ။ ဒါတွေ အကုန်လုံးက တစ်ဖက် က မလိုမုန်းထားတဲ့စိတ်နဲ့ ကောလာ ဟလ လုပ်တာမျိုးတွေ ရှိသလိုကျွန်တော် တို့ မိသားစုကိုကလည်း နေတဲ့ထိုင်တဲ့ ပုံစံက အဘိုးရဲ့ချမှတ်ထားတဲ့ စည်း ကမ်းအတိုင်း နေကြ တယ်။ အဘိုးက နိုင်ငံတော် အခမ်းအနားတွေပဲတက် တက်၊ ဧည့်ခံပွဲပဲ တက်တက် ပြည်သူကို တင်ပြဖို့ မှတ်တမ်းတင်နေတဲ့အတွက် တကယ့်တိုင်းပြည် တာဝန် ထမ်းေ ဆာင် နေတဲ့ အဘိုးကပဲ လုပ်စရာကိုင်စရာလုပ်တယ်။ မိသားစုတွေကို တီဗွီပဲ ရိုက်ရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ ဓာတ်ပုံပဲ ရိုက်ရိုက် မပါဖြစ်အောင် ရှောင်နေရတယ်။ ခရီး သွားလို့ လေ ယာဉ်ပေါ်တက်ရင်တောင် ကင်မရာကိုရှောင်ပြီး သွားရတယ်။ ခြွင်းချက်အားဖြင့် နိုင်ငံတော် အခမ်း အနားတွေမှာ တစ်ဖက်နိုင်ငံက မိသားစု တွေ ပါလာရင်တော့ ရှေ့ထွက် ဧည့်ခံရ တာမျိုးတွေ ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လွတ်လပ်မှု အသီးအပွင့်ကို ခံစားရ တာက ရပ်ကွက်တွေထဲ မှာ ခွေးခြေခုံနဲ့ အကြော်စားရင်တောင် ဘယ်သူမှ မသိ ဘဲနဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် စားနိုင်တယ်။ တစ်ဖက်က ကိုယ့်အကြောင်းကို ပုံမှား ရိုက်ပြီးပြောရင် ပြောလို့ရတဲ့ အပိုင်းတွေ ရှိတယ်။ ပြည်သူလူထုက ကျွန်တော် တို့ကို မသိတာများ တယ်။ စကော်ပီယံ ဂိုဏ်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောနေကြတယ်။ အဲဒီအဖွဲ့ ဘယ်လိုဖွဲ့ထားလဲဆိုတာမသိ ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ညီအစ်ကိုတွေ တစ်ခုခု လုပ်ချင်ရင် ဂိုဏ်းဖွဲ့ပြီးလုပ်ရ မယ့် အနေအထားမှ မဟုတ်တာ။ တကယ်လုပ်မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်နည်းကိုယ့် ဟန်နဲ့လုပ်ရမယ့် အနေအထားပါ။အဲဒီလိုမျိုးဖွဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ သူတို့ရဲ့ အနေအထားကို ပိုလုံခြုံအောင် အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးထွက်လာတဲ့ စကား သံတွေပါ။
► ယတိပြတ် အဖြေကြားသိချင်တာက စကော်ပီယံနဲ့ ပတ်သက်ခဲ့ခြင်း ရှိ မရှိ ဆိုတာပါ။
ယတိပြတ် ပြောနိုင်ပါတယ်။ လုံးဝ (လုံးဝ) ပတ်သက်ခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူး။
► နောက်ဆုံး မေးခွန်းအနေနဲ့ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်ဟာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့သမ္မတ ဖြစ်သင့် တယ်လို့ ထင်ပါသလား။
တကယ်တမ်းဖြစ်လာခဲ့ရင် ဘာမှ မလိုလားစရာ၊ မရှုဆိတ်စရာ မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်ကျေကျေနပ်နပ် ဝမ်းသာဂုဏ် ယူကြောင်း ဆုတောင်းစကားပြောမယ့် အထဲမှာ ပါတယ်။ သို့သော် အားလုံး သိကြတဲ့အတိုင်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဲ့သို့သော မိသားစု ဖွဲ့စည်းပုံမျိုးကို သမ္မတဖြစ်လို့ မရအောင် ရှိထားပါ တယ်။ တားလည်း တားဆီးထားတယ်။ အဲဒီတော့ နိုင်ငံရေး ဆိုတာက အင်မတန် သိမ်မွေ့ပါတယ်။ ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ဖို့လည်း အင်မ တန် ခက်ခဲပါတယ်။ ဒီထက်
ပိုသိမ်မွေ့ တာက သမ္မတဖြစ်နိုင်တဲ့ အနေအထား ပါ။ တစ်တိုင်းပြည်လုံးမှာ Ph.D ရတဲ့ သူ၊ ပန်းချီပညာကျော် စတဲ့သူတွေက ရာနဲ့ ထောင်နဲ့ သောင်းဂဏန်းလောက်ထိ ရှိနိုင်ပါတယ်။ သမ္မတဆိုတာ တစ် ယောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ ဒီတစ်ယောက် တည်းရှိတဲ့ သမ္မတရာထူးကို ရဖို့အတွက် ကံ၊ ဥာဏ်၊ ဝီရိယ အကုန်လုံး စိုက်ထုတ် ရမှာပါ။ တကယ် သမ္မတဖြစ်ဖို့ ကံပါလာ တဲ့သူက ဘယ်လိုပဲ ပိတ်ပင်တားဆီးမှု တွေ ရှိရှိ ဖြစ်သင့်တဲ့ အချိန်မှာ ဖြစ်သွား ပါလိမ့်မယ်။ တကယ်သမ္မတဖြစ်ဖို့ ကံမ ပါလာရင် ဘယ်လောက်ပဲ ပံ့ပိုးမှုတွေ ရှိရှိ၊ ဘယ်လောက်ပဲ ဝိုင်းဝန်းကြိုးစား၊ ဘယ်လောက်ပဲ ချီးမြှောက်နေပါစေ ဖြစ် လာစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။
မိဘရဲ့ စည်းစိမ်တွေနဲ့နေပြီး အစေခံ ကျွန်တစ်ယောက်လို ပစ်မထားပါနဲ့ 
သားသမီးတွေဟာ မိဘနှစ်ပါးသေးသွားမှ ရည်စူးပြီး ကောင်းမှု့ ကုသိုလ်ပြုတာတွထက် ယခုပစ္စပ္ပန် အချိန် ကျွေးတာက ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိပါတယ် ။
အမျှဝေလို့ရတဲ့ ဘုံဟာ သုံးဆယ့်တစ်ဘုံမှာ တစ်ဘုံဘဲရှိတယ် ။
ကိုယ့်မိဘဟာ ဒီဘုံကို ရောက်လိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူမှ တပ်အပ်သေချာပာလို့ မရပါဘူး ၊ စိတ်မချရပါဘူး ၊ ဒါကြောင့်မသေချာတဲ့ အလုပ်ကိုမလုပ်ဘဲ သေချာတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်ပါ ၊ သေချာတဲ့ အလုပ်နဲ့ ပဲ ကျေးဇူးဆပ်ကြပါ ။
စာရေးသူရဲ့ ရပ်ကွက်ထဲမှာရှိပါတယ် ။ မိဘနှစ်ပါးက အသက် ( ၆၀ ၊ ရ၀ ) အရွယ်ရောက်လာပြီဆိုတော့ သားသမီး မြေးမြစ်တွေက အဘိုးကြီး အဘွားကြီးတွနှင့် ထမင်းအတူစားရတာ ရွံစရာကောင်းတယ်ဆိုပြီး အတူတူမစားကြပါဘူး ၊ဒါကြောင့် မိအိုဖအိုနှစ်ပါးကို ထမင်းလေးတွေ ပန်းကန်ထဲထည့် ဟင်းလေးတွေပုံပြီး အရင်ကျွေးထားနှင့်ပါတယ် ။
မသိရင်တော့ ဦးဦးဖျားဖျားကျွေးတာပေါ့ အမှန်တော့ ထိုသို့မဟုတ်ပါ ၊ကဲ ....... စဉ်းစားကြည့်ကြပါ ၊ကောင်းကြသေးရဲ့လား နောက်ပြီး မိဘနှစ်ပါးဟာသားသမီးတွေရဲ့ ထားရာနေ စေရာသွားရတဲ့ဘဝ အသက်အရွယ်ကလည်း ကြီးလာပြီဆိုတော့ အလုပ်ကလည်းမယ်မယ်ရရမလုပ်နိုင် ၊ ဒီသားသမီးတွေကိုဘဲ မှီခိုပြီး မိမိတို့ဘဝအသက်ရှင်ရေးအတွက် ကြိုးစားနေထိုင်ကြရပါတယ် ။
ဟို တစ်ချိန်တုန်းက ဒီစီးပွားဥစ္စာ စည်းစိမ်တွေကို ကိုယ်ရှာဖွေခဲ့တာ မှန်ပါသော်လည်းယခုအချိန်မှာတော့ သားသမီးတွေကိုလွန်ဆန်လို့ မရတဲ့ အခြေအနေကို ဆိုက်ရောက်ခဲ့ရပြီဆိုတော့ သူတို့သဘော အတိုင်းပဲ နေထိုင်ပေးကြ ရပါတော့တယ် ။
ဒါကြောင့် ရှေးယခင်တုန်းက ပိုး ၊ ဖဲ ၊ ကတ္တီပါတွေဖြင့် နှစ်ခြိုက်စွာအိပ်ခဲ့ရသော်လည်း ယခုအချိန်အခါမှာ နောက်ဖေးချောင်က အခန်းကျဉ်းလေးထဲမှာ စောင်စုတ် ပုဆိုးစုတ်တို့အထပ်ထပ်ခင်းပြီး ကျင်ကြီး ကျင်ငယ်သွားလည်း ဒီနေရာ ၊ စားလဲဒီနေရာ ၊ အိပ်လဲဒီနေရာ ၊ဝင်လေထွက်လေကမကောင်းတော့ အနံအသက်တွေနဲ့ ညစ်ပတ်နံစော်နေတော့တာပေါ့ ။
သားသမီးများသည် အသက်အရွယ် အိုမင်းရင့်ရော်နေသော မိဘများအား မသေရုံတမယ် ကျွေးထားကြပေသည် ။
တချို့ ဆိုလျှင် ထားစရာနေရာမရှိသဖြင့် ဘိုဘွားရိပ်သာကို မျက်နှာလွှဲခဲပစ်ပို့ထားလိုက်ကြပြန်တော့တယ် ။
တစ်ချို့ ဆိုလျှင် ဘေးပတ်ဝန်းကျင် ပြောမှာစိုးသည့်အတွက်ကြောင့် မဖြစ်သာလို့ အိမ်ပေါ်ခေါ်တင်ထား ကြရတာပါ ။
သားသမီးဖြစ်သူက အမေအဖေကို တစ်လကြာလို့ တစ်ခါဝင်မကြည့် စကားမပြောဖြစ် မိမိသားကဒီလိုနေမှတော့ ချွေးမကလည်း ဘယ်ပြောကောင်းတော့မလဲ ကျွေးမွေးတာကအစ အကျန်မကျွေးယုံတမယ် ဆက်ဆံတာကလည်း အိမ်ဖော်မတစ်ယောက်လို အိမ်ပေါ်မှာနေလို့ဆိုပြီး ကျွန်တစ်ယောက်လို ပန်းကန်ခွက်ယောက် ဆေးကြောခိုင်း ၊ ဒီလိုနဲ့ ကျေးဇူးဆပ်တယ်ဆိုပြီး အိမ်ပေါ်ခေါ်ထားတာလား ၊ ကိုယ့်ဟာကိုယ်စဉ်းစားကြည့်ကြပါ ၊ဒီအဖြစ်မျိုးက ဘယ်လိုမှ မထားကောင်း ပါဘူးးး
သားသမီး ဖြစ်သူများ ဒီစာလေးဖတ်မိပြီး စဉ်းစား ဆင်ချင် နိုင်ကြပါစေလို့....
( သားသမီးနှင့် မိဘ ဖြစ်ရပ်မှန်စာအုပ်မှ )
သင်္ချာမရတဲ့ တတိယတန်းကျောင်းသူတွေကို အပြစ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ဖက်နမ်းခိုင်းခဲ့တဲ့ ကျောင်းဆရာကို ကသာတရားရုံးမှာ တရားစွဲဆို
Posted by drmyochit Wednesday, November 20, 2013, under မှုခင်း | 1 comment
ပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်အပေါ် အတန်းပိုင်ကျောင်းဆရာအား ကသာမြို့နယ်တရားရုံးတွင် ၁၉၊၁၁၊၂၀၁၃ရက်နေ့က ဥိးတိုက်လျှောက် တိုင်ကြားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း တိုင်ကြားခဲ့သူ
ကျောင်းသူမိဘများမှ HJL မီဒီယာရုံးခန်းသို့ လာရောက် အသိပေး ပြောဆိုသွားခဲ့ပါသည်၊
ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်မှာ ကသာမြို့နယ်၊မြင်းကျောင်းကုန်းအနီးရှိ အထက်ချောင်းဝကျေးရွာ အ.မ.က(၂၈)ရှိ တတိယတန်းအတန်းပိုင်ဆရာဦး-------မှ ၃၀၊၁၀၊၁၃ရက်နေ့တွင် ကျောင်းသူကျောင်းသားများအား
သင်္ချာမေးခွန်း မေးမြန်းခဲ့ပါသည်၊ထိုသို့မေးမြန်းခြင်းကို မဖြေဆိုနိုင်သည့် ကျောင်းသူ(၅)ဦးအား အတန်းရှေ့ထွက်စေခဲ့ပြီး ကျောင်းသား(၅)ယောက်ကို ဖက်နမ်းစေရန် ခိုင်းစေခဲ့ကြောင်းနှင့် ထိုသို့ ဖက်နမ်းခံရခြင်းမှာ
ယခုရက် တစ်ခါထဲ မဟုတ်ဘဲ မကြာခဏအနမ်းခံခဲ့ရပါကြောင်း အနမ်းခံရသူ တတိယတန်းကျောင်းသူ မအိ-------မှ မီဒီယာကို ပြောဆိုခဲ့ပါသည်၊ ထိုသို့ ကျောင်းခန်းအတွင်း မကြာခဏအနမ်းခံနေရသည့် ကိစ္စကို
ကျောင်းသူများမှ မပြောဆိုရဲခဲ့ကြသော်လည်း ကျောင်းသူ မခင်-----မှ အိမ်ရောက်စဉ် အဖိုးဖြစ်သူ ဦးကျော်ဌေးကို ပြောပြလိုက်မိရာမ ထိုသတင်းရွာထဲ ပြန့်သွားပြီး နောက်ရက် မနက်ကျောင်း တက်တက် ချင်းအနမ်းခိုင်းခဲ့သူ အတန်းပိုင်ဆရာမှ အနမ်းခံခဲ့ရသူ ကျောင်းသူ(၅)ယောက်နှင့် တိုင်ကြားခဲ့သူ မခင်----ကို ကျောင်းရှေ့ထုတ်၍ ပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ခဲ့ပါသည်၊
ထိုရိုက်နှက်ခံရမှုကြောင့် မခင်----၏ ကြောကုန်း၊တင်ပါးနှင့် ဦးခေါင်းတို့တွင် အရှိုးရာများထင်ခဲ့ရပါသည်၊ ထိုဖြစ်စဉ်ကို အနမ်းခံခဲ့ရသည့် မအိ---၏မိဘများနှင့် အရိုက်ခံခဲ့ရသူ မခင်---၏ မိဘများမှ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့
သွားရောက်တိုင်ကြားခဲ့ရာ အတန်းပိုင်ဆရာမှ မှားမိခဲ့ကြောင်း ၀န်ခံထွက်ဆိုခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်၊ထိုတောင်းပန် ၀န်ခံချက်ကို ကျောင်းသားမိဘများမှ ကျေနပ်ခြင်းမရှိသောကြောင့် ကသာမြို့နယ်ပညာရေးမှူးထံ အဖိုးဖြစ်သူ
ဦးကျော်ဌေးကိုယ်တိုင် အဖေါ်တစ်ဦးနှင့်အတူ သွားရောက်တိုင်ကြားခဲ့ပါသည်၊ထိုသို့တိုင်ကြားနေစဉ် အ.မ.က(၂၈)ကျောင်းအုပ်ဒေါ်ဥမ္မာစိုးရောက်လာသဖြင့် မြို့နယ်ပညာရေးမှူးမှ ရွာသို့ ပြန်၍ ညှိနှိုင်းကြရန် ဖြေရှင်းပေးခဲ့ရာ
ဦးကျော်ဌေးမှ မညှိနှိုင်းလိုကြောင်း ဌာနဆိုင်ရာအရေးယူမှုသာ ပြုလုပ်ပေးရန်တောင်းဆို တိုင်ကြားခဲ့ သည်ဟု အဖိုးဖြစ်သူမှ ပြောပြပါသည်၊
ထိုသို့တိုင်ကြားခဲ့ခြင်းကို အရေးယူမှု မရှိသည့်အတွက် ယခုလို ကျောင်းသားမိဘ(၂)ဦးမှ ကသာမြို့နယ် တရားရုံးထံ ဦးတိုက်လျှောက်လွှာ (၂)ခုဖြင့် တိုင်ကြားခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်၊အခြားအနမ်းခံရသူ ကျောင်းသူ(၄)ယောက်အား
အတန်းပိုင်ဆရာမှ အနမ်းခံရသည့် ကိစ္စကို လူကြီးတွေ မေးရင် မဟုတ်ကြောင်း ငြင်းဆိုရန်နှင့် အရိုက်ခံရသည့် ကိစ္စသာ ပြောကြားရန်သင်ကြားနေပြီး ခိုင်းသည့်အတိုင်း မလုပ်ပါက စာမေးပွဲချပစ်မည်ဟု ခြိမ်းချောက်နေကြောင်းလည်း
ထိုဖြစ်စဉ်နှင့်ပါတ်သက်၍ ကသာမြို့နယ် တရားရုံးသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာ ထိုဦးတိုက်မှုကို ယနေ့ပင် လက်ခံရရှိခဲ့ပြီး ကသာရဲစခန်းသို့ ကျင့်(၂၀၂)အရ စစ်ဆေးရန် ညွှန်ကြားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြု ဖြေကြားသွားခဲ့ပါသည်။
Vietnamese Super Model- Le Hoang Bao Tran
Posted by drmyochit Wednesday, November 20, 2013, under ဓါတ်ပုံများ | No comments
Hwang Mi Hee Photo
ယုံချင်ယုံ မယုံလျှင် ပုံပြင်မှတ်ဟု ပြောရအောင်ကလည်း ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီးက ယုံတမ်းစကား ပုံပြင် လည်း မဟုတ်၊ စိတ်ကူးယဉ် ဒဏ္ဍာရီလည်း မဟုတ်လေတော့ အတော်စဉ်းစားရ ခက်နေပါသည်။ ကမ္ဘာ စစ်ကြီး အမှန်တကယ် ဖြစ်ပွားခဲ့သောကြောင့် အသက်နှင့်ပစ္စည်း အိုးအိမ်များ သန်းနှင့်ချီ၍ ဆုံးရှုံးခဲ့ရ သည်ကို လူတိုင်းအသိပါပင်။ သို့သော်လည်း ၎င်းကမ္ဘာနှင့် ဆက်နွယ်နေသော အဓိက စစ်ခေါင်းဆောင် ကြီးများ၏ လျှို့ဝှက် အံ့သြမှု တရပ်ကိုတော့ လူတိုင်းမသိကြသေး။
ကမ္ဘာကို မီးဟုန်းဟုန်း တောက်လောင်စေခဲ့သော စစ်ခေါင်းဆောင်ကြီး (၅)ဦးတို့၏ နက်နဲ ဆန်းကြယ် လှသည့် နောက်ကြောင်း ရာဇ၀င် အချက်အလက်များက အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းလှပါ၏။
ကမ္ဘာကို ဂယက်ရိုက်စေခဲ့သော စစ်ခေါင်းဆောင်ကြီး (၅)ဦးတို့မှာ ဟစ်တလာ၊ ချာချီ၊ ရူးစဗဲလ်၊ စတာလင်၊ တိုဂျို တို့ဖြစ်ကြပါသည်။
အထက်ပါ (၅)ဦးတို့သည် ကမ္ဘာ တနေရာဆီမှာ နေကြသော်လည်း တဦးနှင့်တဦး အတိတ် နိမိတ်ချင်း ဆက်သွယ်နေကြောင်း ကာယကံရှင်တို့ကိုယ်တိုင် မသိလိုက်ကြပေ။ 'ဘယ်ဘ၀က ရေစက်ဆုံလာလို့လဲမသိ' ဟု ပြောယူရလောက်အောင် သူတို့၏ ဘ၀ဇာတာသည် မွေးကတည်းကပင် အဆက်အစပ် ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်၏။
တစ်ယောက်စီ၏ အကြောင်းအချက်ကို တင်ပြရသော် .....
1. ပထမ စစ်ခေါင်းဆောင် ဟစ်တလာ
သူသည် နာဇီဂျာမနီ၏ စစ်အာဏာရှင် ဖြစ်၏။ သူ၏နောက်ခံ ရာဇ၀င်ကား ...
2. ဒုတိယ စစ်ခေါင်းဆောင် ၀င်စတန် ချာချီ
သူသည် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၏ ၀န်ကြီးချုပ် ဖြစ်၏။ သူ၏နောက်ခံ ရာဇ၀င်ကား ...
3. တတိယ စစ်ခေါင်းဆောင် ရူးစဗဲလ်
သူသည် အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ သမ္မတ ဖြစ်၏။ သူ၏နောက်ခံ ရာဇ၀င်ကား ...
4. စတုတ္ထ စစ်ခေါင်းဆောင် ဂျိုးဇက်စတာလင်
သူသည် ရုရှားနိုင်ငံ၏ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဖြစ်၏။ သူ၏နောက်ခံ ရာဇ၀င်ကား ...
5. ပဉ္စမ စစ်ခေါင်းဆောင် တိုဂျို
သူသည် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ရေတပ်ဦးစီးချုပ် ဖြစ်၏။ သူ၏နောက်ခံ ရာဇ၀င်ကား ...
Posted by drmyochit Wednesday, November 20, 2013, under မှုခင်း | No comments
နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက် နံနက် ၁ နာရီခန့်က မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ဘောဂရပ်ကွက် ဘောဂ ၂ လမ်းရှိ နေအိမ်တစ်အိမ်၌ အသက်ကိုးနှစ်အရွယ် လေးတန်းကျောင်းသူ တစ်ဦးနှင့် မိခင်ဖြစ်သူတို့ လည်ပင်းအား ဓားဖြင့် လှီးသတ်ခံရသည့် ဖြစ်စဉ်တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ရပ်ကွက်နေသူများနှင့် သေဆုံးသူ၏ ဆွေမျိုးများထံမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
သေဆုံးသူများမှာ မမြမြသန်း (ခ) ချောစု အသက် (၃၆) နှစ်နှင့် ၎င်း၏သမီးဖြစ်သူ မနှင်းအေးဝေ အသက်ကိုးနှစ်၊ လေးတန်းကျောင်းသူတို့ ဖြစ်ပြီး မနှင်းအေးဝေမှာ နေအိမ်အိပ်ခန်းတွင်း၌ လည်ပင်းအလှီးခံရသည့် ဒဏ်ရာဖြင့် သေဆုံးနေကာ မိခင်ဖြစ်သူ မမြမြသန်း (ခ) ချောစုမှာ နေအိမ်အနီး လမ်းမပေါ်၌ လည်ပင်းအလှီးခံရသည့် ဒဏ်ရာများဖြင့် သေဆုံးနေကြောင်း သိရသည်။
သေဆုံးသူ မမြမြသန်း နေအိမ်အနီး လမ်းမ၌ သေဆုံးနေသည်ကို ရပ်ကွက်အတွင်းမှ လူငယ်တစ်ဦးက ဆိုင်ကယ်စီးလာစဉ် မီးရောင်အောက်တွင် မြင်တွေ့ခဲ့သဖြင့် ဘောဂရပ်ကွက် ရာအိမ်မှူး (သေဆုံးသူ၏ ယောက္ခမ) ဖြစ်သည့် ဦးသန်းမြအား ပြောပြရာမှ သွားရောက်ကြည့်ရှုရာတွင် တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး သေဆုံးသူ၏ နေအိမ်အတွင်းသို့ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုရာ သေဆုံးသူ မမြမြသန်း၏ သမီးဖြစ်သူ မနှင်းအေးဝေမှာလည်း နေအိမ်အိပ်ခန်းထဲတွင် စောင်ဖြင့် ပတ်ပြီး လည်ပင်းတွင် ဓားဒဏ်ရာဖြင့် သေဆုံးနေကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
သေဆုံးသူ၏ ယောက္ခမဖြစ်သူ ဒေါ်စန်းမြင့်က"အဒေါ့်ချွေးမနဲ့ မြေးမလေး ခုလိုမျိုး ရက်ရက်စက်စက် အသတ်ခံရတာ မနက် ခုနစ်နာရီလောက်မှ အဒေါ်သိရတာပါ။ သားအငယ်က အဒေါ်တစ်ခုခု ဖြစ်သွားမှာစိုးလို့ ညတွင်းချင်း မပြောဘူး။ မနက်ရောက်မှ ပြောလို့သိရတာပါ။ အန်တီ့သားကို သူ့မိန်းမနဲ့ ကလေး ဒီလိုအသတ်ခံရတယ်ဆိုတာ မပြောသေးပါဘူး။ သူက ခရီးသွားနေတာ" ဟု နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်က အခင်းဖြစ်ပွားရာအိမ်တွင် ဆိုသည်။
သေဆုံးသူ မမြမြသန်း၏ ခင်ပွန်းဖြစ်သူမှာ မြင်းခြံဘက်သို့ ခရီးထွက်သွား၍ အခင်းဖြစ်နေ့က နေအိမ်တွင် အသတ်ခံရသည့် သားအမိနှစ်ဦးသာရှိပြီး သေဆုံးသူ၏ သားကြီးဖြစ်သူမှာ သူခိုးကြီးည ဖြစ်သဖြင့် ၎င်းဖွင့်လှစ်ထားသည့် ကွမ်းယာဆိုင်၌ သွားအိပ်ခဲ့ကြောင်း သေဆုံးသူ၏ ဆွေမျိုးများထံမှ သိရသည်။
သေဆုံးသူ၏ ယောက်က္ခမဖြစ်သူ ဒေါ်စန်းမြင့်က"အဒေါ့် ချွေးမက အဒေါ်တို့ အိမ်ကိုလာတဲ့လမ်းမှာ သေနေတာဆိုတော့ အဒေါ့်အိမ်ကို အားကိုးတကြီး ပြေးလာတာ ဖြစ်မယ်လို့ ထင်တယ်။ အရင်ကလည်း သူ့ယောက်ျားနဲ့ စကားများရင်တောင် အဒေါ့်ဆီလာပြီး တိုင်နေကျ။ ခုလိုဖြစ်သွားတာ ရင်ထဲမှာ လုံးဝမကောင်းဘူး" ဟု ဆိုသည်။
မင်္ဂလာဒုံ မြို့မရဲစခန်းမှူး ရဲမှူး အောင်သိန်းဝင်းက"ဒီဖြစ်စဉ်ကို လက်ရှိအမှုဖွင့်ပြီး ကျူးလွန်သူကို အမြန်ဆုံး ဖော်ထုတ်နိုင်အောင် စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်"ဟု နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်အား မင်္ဂလာဒုံမြို့မ ရဲစခန်းမှ (ပ)၇၂၄/၁၃ ပြစ်မှုပုဒ်မ-၃၀၂ ဖြင့် အမှုဖွင့် စစ်ဆေးနေကြောင်း သိရသည်။
လာမယ့် ၆လအတွင်း စတင်ရောင်းချဖို့ မျှော်မှန်းထားတဲ့ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဆင်းကတ်တွေနဲ့ ငွေဖြည့်ကတ်တွေ မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ ရောက်ရှိစေဖို့ ဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ လက်တွဲသွားမယ်လို့ တယ်လီနော်မြန်မာက နိုဝင်ဘာ ၁၉ရက်နေ့မှာ ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
လမ်းဘေးဆိုင်တွေမှာ ဆင်းကတ်နဲ့ ငွေဖြည့်ကတ်တွေ ဝယ်ယူနိုင်မယ့် အာရှဖြန့်ချိရေးစနစ်ကို နမူနာယူပြီး လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ဒေသခံလုပ်ငန်ှးရင်တွေကို မိတ်ဖက်အဖြစ် လက်တွဲဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်လို့ ကုန်သည်ကြီးများဟိုတယ်မှာပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
Ref & Credit: Kamayut Media
*** နှုတ်ခမ်းသားတွေမည်းနေလို့စိတ်မညစ်စေလို ***
Posted by drmyochit Wednesday, November 20, 2013, under ကျန်းမာရေးဆောင်းပါး | No comments
နှုတ်ခမ်းတစ်စုံရဲ့ လှပမှုဟာ အမျိုးသမီးတွေအတွက် မရှိမဖြစ်ပါ။
ဒါကြောင့်လည်း အမျိုးသမီးတိုင်းလိုလိုမှာ အနဲဆုံး နှုတ်ခမ်းဆိုး ဆေးအရောင်၃-မျိုးလောက်ရှိတတ်ကြပြီး၊ အပြင်သွားခါနီးတိုင်း မိမိဝတ်ဆင်မယ့်အ၀တ်အစားအရောင်နဲ့အနီစပ်ဆုံး နှုတ်ခမ်း နီဗူးလေးကို ထုတ်ဆိုးလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဘယ်လိုပင်နှုတ်ခမ်းဆိုးဆေးအကူအညီသုံးပြီးလှပနေပါစေ မိမိရဲ့ နှုတ်ခမ်းသားအ ရောင်ကိုပန်းဆီရောင်လေးသဖွယ် သဘာဝအတိုင်းလှနေချင်တာ မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့ ဆန္ဒပါ။ အမျိုးသားတွေလဲ ထို့ အတူပါဘဲ နှုတ်ခမ်းမည်းမည်းကြီး မဖြစ်ချင်ကြပါဘူး။
အချို့အမျိုးသား/အမျိုးသမီးတွေမှာ အရွယ်မတိုင်မီ နှုတ်ခမ်းသားတွေမည်းလာတတ်ကြပါတယ်၊ အကြောင်းရင်းကတော့ ကော်ဖီ-လ္ဘက်ရည်-ဆေးလိပ်လွန်စွာသောက်သုံးခြင်းကြောင့် ကဖိန်းဓာတ်ရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၊နေပူထဲအထွက်များ၍ နေ လောင်ခြင်း၊ ရေနွေး၊ ဟင်းချို ...စတဲ့အရည်ပူပူတွေကို
ခွက်ပူပူထဲကနေ စုပ်ယူသောက်လေ့ရှိခြင်း၊ ခဲဓာတ်များတဲ့ နှုမ်းခမ်းဆိုးဆေးအန္တရာယ၊် ရောဂါတစ်ခု ခုကြောင့်သောက်သုံးနေရတဲ့ ပဋိဇီဝဆေးတွေရဲ့တန်ပြန်သက်ရောက်မှု…စတာတွေကြောင့် နှုတ်ခမ်း သားကို မည်းလာစေပါတယ်။အဲဒီအတွက် စိတ်မညစ်ကြပါနဲ့ ။ ဟောဒီမှာ ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီး ငွေကုန်ကြေးကျမများတဲ့ နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေရှိပါတယ်။
(သကြားနဲ့ ပွတ်ပါ) နှုတ်ခမ်းမည်းမည်းတွေအတွက် သကြားက အကောင်းဆုံးဆေးပါဘဲ။လ္ဘက်ရည်ဇွန်း ၃-ဇွန်းစာပမာဏရှိတဲ့ သကြားမှုန့် ဖြူဖြူလေးတွေကို ထောပတ်နဲ့ရောပြီးနောက်၊ ရလာတဲ့အနှစ်ကို နှုတ်ခမ်းပေါ်လိမ်းပေးပါ။ ထောပတ်က နှုတ်ခမ်းသား အစိုဓာတ်ကိုထိန်းပေးသလို၊ သကြားက နှုတ်ခမ်းပေါ်ရှိ ဆဲလ်အသေတွေကိုဖယ်ရှားပေးပါတယ်။
(မုန်လာဥနီအလုံး(ခေါ်)သကြားမုန်လာ(ခေါ်)Beetroot ကိုသုံးပါ)သွေးကြည်ရောင်လို ရဲရဲနီတဲ့ သကြားမုန်လာဥတွေက အရေ ပြားပေါ်ရှိဆဲလ်အသေတွေကို ကောင်းစွာဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီးတော့၊ နှုတ်ခမ်းသာမည်းခြင်းကိုတဖြည်းဖြည်းလျော့ပါးသွားစေပါ တယ်။
(သံလွင်ဆီလိမ်းပါ) အသားအရေကိုကောင်းကျိုးပြုကာအာဟာရတန်ဖိုးမြောက်များစွာပါတဲ့ သံလွင်ဆီကို နှုတ်ခမ်းပေါ်မှာ အစက်ကလေးတွေချပြီးတော့ နှုတ်ခမ်းသားထဲစိမ့်ဝင်အောင် ပွတ်လိမ်းပေးပါ။
(နှင်းဆီပွင့် ချပ်လေးတွေ သုံးပါ) နှင်းဆီပွင့် ချပ်လေးတွေကို ထောပတ်နဲ့ရောထောင်းပြီးတော့ ရလာတဲ့ အနှစ်တွေကို နှုတ်ခမ်းပေါ် အုံတင် ထားပေးပါ။ အဲဒီလို ရက်သတ္တ ၁-ပတ်မှာ ၂-ကြိမ်လောက် လုပ်ပေးခြင်းဖြင့်မည်းနေတဲ့နှုတ်ခမ်းသားတွေ တဖြည်းဖြည်း အရောင် ဖျော့သွားလာပါလိမ့်မယ်။်
(စတော်ဘယ်ရီသီးတွေနဲ့ ပွတ်ပါ) စတော်ဘယ်ရီသီးတွေကလည်းနှုတ်ခမ်းသားမည်းခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံး သဘာဝဆေး လေးတွေပါဘဲ။အဲဒီအသီးမှည့်မှည့်တွေကို ရှာစောင်းလက်ပပ်ဂျယ်လီ၊ ပျားရည်တို့ နဲ့ ရောပြီး နှုတ်ခမ်းသားကိုပွတ်တိုက်ပေးပါ။ ၁၀-မိနစ်ခန့် အကြာမှာရေအေးဖြင့်ဆေးပါ (ရေခဲရေမဟုတ်ပါ)
(သလဲသီး သုံးပါ) သလဲသီးကိုအစေ့ဖယ်ပြီးနောက် ရလာတဲ့အသားဖတ်လေးတွေကိုထောပတ်နဲ့ နယ်`၍၊ နှုတ်ခမ်းသားတွေကို သုတ်လိမ်းပေးပါ။ ညအိပ်ယာဝင်ခါးနီးတိုင်းလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ရက်အနည်းငယ် အတွင်းမှာ ပင်နှုတ်ခမ်းသားလေး သိသိသာသာ ပန်းရောင် ပြောင်းလာနိုင်ပါတယ်။
(ဆားနဲ့ ပွတ်ပါ) အိမ်သုံးဆားမှုန်လေးတွေကို နွားနို့နဲ့ ရောပြီးတော့၊ရလာတဲ့ အနှစ်ပျစ်ပျစ်တွေကို နှုတ်ခမ်းသားပေါ် ခပ်ဖွဖွ ပွတ်တိုက်ပေးပါ။၁၅-မိနစ်ခန့်အကြာ ရေအေးဖြင့်ဆေးပါ (ရေခဲရေမဟုတ်ပါ)
(ရှားစောင်းလက်ပပ်ဂျယ်လီသုံးပါ) မည်းညစ်နေတဲ့ နှုတ်ခမ်းသားကိုမူလအရောင်ပြန်ရစေဖို့ အတွက် ရှားစောင်းလက်ပပ်ဂျယ်လီ ကအကောင်းဆုံးသမားတော်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအပင်ထဲက အနှစ်တွေကို ညှစ်ချပြီးတော့နှုတ်ခမ်းသားပေါ်တင်ပြီး ပွတ်လိမ်း လိုက်ရုံပါဘဲ။
(ဌက်ပျောသီးသုံးပါ) ဌက်ပျောသီးမှည့်မှည့်ကို နွားနို့ ၊ ပျားရည်တို့ဖြင့် သမအောင်ရောနယ်ပြီးတော့ နေ့ စဉ်လိမ်းပေးပါ။ ရက် အနည်းအတွင်းမှာပင်ထူးခြားတဲ့ အာနိသင်ကို လက်တွေ့ ခံစားရပါလိမ့်မယ်။
19-11-2013 နေ့ ထုတ်ပြည်ထောင်စုနေ့ စဉ်သတင်းစာ
တရုတ် ရဲဌာနများတွင် မျက်နှာကိုတိပ်ပတ်ပြီး ထွက်ဆိုခ...
ကရင်ပြည်နယ် မှာ ပြဇာတ်ကရင်း ဘောလုံးကန်ခဲ့တဲ့ ရာဇာေ...
မိဘရဲ့ စည်းစိမ်တွေနဲ့နေပြီး အစေခံ ကျွန်တစ်ယောက်လ...
သင်္ချာမရတဲ့ တတိယတန်းကျောင်းသူတွေကို အပြစ်ပေးတဲ့အနေန...